Ikotishi elikhanyayo nelesimanje eViksfjord / Larvik - I-Airbnb
Ikotishi elikhanyayo nelesimanje eViksfjord / Larvik
Larvik, Vestfold, i-Norway
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Eirunn
U-Eirunn Ungumbungazi ovelele
Ikhabethe elithi "Ekely" libukeka kahle futhi lisemaphandleni ukuya kumamitha angama-30 ukusuka onqenqemeni lwamanzi e-Viksfjord engaphakathi - phakathi kweLarvik neSandefjord. Lena indawo efanelekile yokudlala, ukushiswa yilanga, impilo yangaphandle, ukudoba kanye nokuzijabulisa kwe-cottage! Lapha kuhle ukuqala nge-kayak engenzeka, i-windsurfing nokunye okunjalo. Indawo yangaphandle inesikhala esiningi semisebenzi eminingi, futhi imoto ithola uphahla phezu kwekhanda layo ku-carport. Ngaphakathi, i-cabin ibonakala ikhanya futhi yesimanje. I-Smart TV, iphakheji ye-Canal digital TV kanye ne-Wi-Fi kufakiwe. Indlela emfushane eya olwandle.
Ikotishi lisendaweni ethule futhi enokuthula enamathuba amaningi amahle okuqwala izintaba ngebhayisikili, ngezinyawo noma ngolwandle. Le ndawo iyindawo edumile yokudoba ama-sea trout. I-Bjønnesstranda enekhiosk evulekile ngesikhathi samaholide ehlobo esikole ithatha cishe imizuzu eyi-10 ukuya khona. 2 km ukuya e-kaupang - indawo yokuhweba engokomlando ngezikhathi zamaViking.
Cishe amaminithi angu-20 ukushayela ukuya e-idyllic Stavern, futhi endaweni lapho uzothola khona izinto ezikhangayo ezifana neFoldvik Family Park, Mølen, Kyststien, Fredriksvern Verft, Minnehallen m.m.
E-Larvik ungajabulela ukuthula e-Bøkeskogen futhi kukhona nezindawo zokudlela ezinhle njenge-Bøkekroa, i-Pakkhuset ne-Bedehuset. Kusukela ngePhasika kuze kube sekupheleni kwehlobo, i-Seilerhytta Kro nayo ivuliwe.
Itheminali ye-Color Line eya ku-Superspeed2, ehamba kabili ngosuku ukuya e-Hirtsals isendaweni eseduze - cishe imizuzu eyi-10 ngemoto.
4.90 · 70 okushiwo abanye
Indawo ethule futhi enokuthula, elungele umndeni endaweni yasemakhaya neseceleni kwechibi
UEirunn Ungumbungazi ovelele